5. ဂျာမန်စိတ္တဇ လူသတ်သမ Gesina Margaretha Gottfried
သူမရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူတွေထဲမှာ သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါး၊ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနှစ်ယောက်၊ စေ့စပ်ထားသူနဲ့ သူမရဲ့ ကလေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သူမဟာ အဲဒီလို လူသတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်နေပေမယ့် သူမအပေါ် တဦးတယောက်ကမှ သံသယမဝင်အောင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး သူမရဲ့ သားကောင်တွေစားမယ့် အစားအစာတွေထဲမှာ ကြွက်သတ်ဆေးကိုရောကျွေးပြီး နေမကောင်းဖြစ်စေပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာတော့ အကောင်းမွန်ဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင်အမြင်ကောင်းတွေကို ရယူခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပိရိတဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ကြင်နာသနားမှုတွေရရှိခဲ့ပြီး သူမနဲ့ပတ်သတ်တဲ့လူတွေ တဦးပြီးတဦးသေဆုံးသွားရခြင်းကို သံသယမဝင်ကြဘဲ ကံမကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်အဖြစ်သာ မှတ်ယူခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ ၁၂ယောက်မြောက်သားကောင်ဖြစ်သူ Johann Christoph Rumpff က သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အစားအစာတွေအပေါ်မှာ အဖြူရောင်အမှုန့်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သံသယဝင်ခဲ့ကာ သူယုံကြည်ရတဲ့ ဆရာဝန်ကို စစ်ဆေးစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရင်က သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ လူသတ်မှုဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
သူမအပေါ် သံသယဝင်နေတာကို ရိပ်မိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Bremen မြို့ကနေ Hanover မြို့သို့ ပြောင်းရွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။
သူမကို ၁၈၂၈ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်၊ သူမရဲ့ ၄၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ညမှာ ဖမ်းစီးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၈၁၃ မှ ၁၈၂၇ အတွင်းဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Bremen နှင့် Hanover ရှိ လူ ၁၅ ဦးကို အဆိတ်ခပ်သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၃၁ ခုနှစ် ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာတော့ ခေါင်းဖြတ်သေဒဏ်စီရင်ခဲ့ပါတယ်။
4. အရှောင်အတိမ်းကောင်းခဲ့တဲ့ Bella Poulsdatter Sorensen Gunness
Bella ရဲ့ လူသတ်မှုတွေဟာ ဖော်ထုတ်မရခဲ့ပါဘူး။ သူမသည် ၁၈၅၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နော်ဝေနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၈၈၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် ရာဇဝတ်မှုတွေကို ၁၈၈၄ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၀၈ ခုနှစ်ကြားမှာ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။ Bella သည် ၁၈၈၄ တွင် Mads Sorenson နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ဦးဟာ သကြားလုံးဆိုင်တဆိုင်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သကြားလုံးဆိုင်ဟာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး အဲဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးဟာ အာမခံကြေးရရှိခဲ့ပြီး ရရှိခဲ့တဲ့ အာမခံကြေးနဲ့ Sorenson ဟာ အသက်အာမခံနှစ်ခုကို ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၉၀၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့ အာမခံပေါ်လစီ ကုန်ဆုံးသွားမယ့်နေ့မှာ Sorenson ဟာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Bella ရဲ့ အပြောအရ ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ကာ နာကျင်မှုကို သက်သာစေရန် ကွီနိုင်းပေါင်ဒါကို
အသုံးပြုပြီးနောက် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Bella ဟာ အသက်အာမခံပေါ်လစီအရ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်မှာတော့ Bella ဟာ Peter Gunness နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး၊ ရှစ်လအကြာတွင် ဦးခေါင်းခွံဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Bella ရဲ့ အပြောအရ စင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ အသားကြိတ်စက်တခုဟာ ပီတာရဲ့ ခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ခြင်းကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ Bella ရဲ့ အိမ် မီးလောင်ခဲ့ပြီး Bella နဲ့ ကလေးသုံးယောက်လို့ယူဆရတဲ့ အလောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေဟာ ဆက်လက်စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အခါ Bella နဲ့ သူမအကိုတို့ကြားက စာပေးစာယူကိစ္စတွေကို
တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး Bella သည် La Porte မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် တိတ်တဆိတ်ကြံစည်မှုများနဲ့ ပိုက်ဆံများကို သယ်ယူဖို့ကိစ္စတွေကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် သူမရဲ့ ခြံဝင်းအတွင်းနဲ့ အိမ်အပြင်ဘက် ရေကန်အနားတဝိုက်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြတဲ့အခါ အပိုင်းပိုင်းအထစ်ထစ်ဖြတ်တောက်ထုချေခြင်းခံထားရတဲ့ အလောင်းပေါင်းများစွာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ Bella ရဲ့ အမှုကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်အသတ်ခံရတဲ့သူတွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ Bella ဟာ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီလားဆိုတာကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ Bella ဟာ စိတ်ရောဂါခံစားနေရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ လူပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းယူဆခဲ့ကြရပါတယ်။
3. ဂင်းနစ်စာအုပ်မှာမှတ်တမ်းတင်ရတဲ့အထိ ရက်စက်ခဲ့တဲ့ Delfina and Maria de Jesus Gonzales ညီအမနှစ်ဦး
ဒီမက္ကဆီကို ညီအမနှစ်ဦးဟာ ၁၉၅၀ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၆၀ နှစ်လယ်လောက်အထိ သူတို့ရဲ့ ပြည့်တန်ဆာအိမ်နေရာမှာ အနည်းဆုံး လူ ၉၁ ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Guanajuato မြို့အတွင်း မိန်းခလေးငယ်များပျောက်ဆုံးနေတာကို စုံစမ်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့ ရဲမှူးက သံသယရှိတဲ့ Josefina Gutiérrez အမည်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ ၎င်းညီအမနှစ်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒီကယ်လ်ဆန်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ အိမ်မှာ အမျိုးသမီးအလောင်းရှစ်ဆယ်၊ အမျိုးသား ၁၁ယောက်နဲ့ သန္ဓေသားအလောင်းအများအပြားကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
စစ်ဆေးမှုများအရ ၎င်းညီအမဟာ အမျိုးသမီးငယ်များကို အိမ်ဖော်အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ လှည့်ဖျားခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် မိန်းခလေးအများစုကို ဘိန်းဖြူ(သို့) ကိုကင်းများ ထိုးသွင်းပြီး ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ညီအမနှစ်ဦးဟာ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်များ၊ အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မကျင့်ခံရခြင်းကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုမပေးနိုင်တောတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်များနဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ကောင်းမွန်စွာဝန်ဆောင်မှုမပေးဟု ယူဆရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်များကို လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပိုက်ဆံအများအပြားနဲ့ လာရောက်တဲ့ ဖောက်သည်တွေကိုလည်း ပိုက်ဆံရလိုမှုကြောင့် သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိန်းခလေးငယ်များကို သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်လို့ မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ အစားအစာကျွေးဖို့ မတန်တော့တဲ့အတွက် သတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၎င်းညီအမနှစ်ဦးကို ထောင်ဒဏ် နှစ်၄၀ စီချမှတ်ခဲ့ပြီး Delfina ဟာ ထောင်ထဲတွင် မတော်တဆမှုတခုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မာရီယာဂွန်ဇာလက်ကတော့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးတဲ့နောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ညီအမနှစ်ဦးနဲ့အတူ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ကာမဲန်နဲ့ မာရီယာလူစီယာဆိုတဲ့ ညီအမနှစ်ဦးလည်းရှိပြီး ကာမဲန်ကတော့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ထောင်ထဲမှာဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး မာရီယာလူစီယာကတော့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီးရဲ့အသတ်ခံရမှာကို ကြောက်လန့်ကာ ရူးသွပ်သွားပါတယ်။
2. ဟန်ဂေရီယန် အာဆင်းနစ်အမျိုးသမီး Angel Makers of Nagyrév
အသက်၄၀ အရွယ်ရှိတဲ့ သူနာပြုနဲ့သားဖွားဆရာမ Mrs. Fazekas သည် ဟန်ဂေရီယန်ကျေးရွာ Nagorev ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လူပေါင်း ၃၀၀ လောက်အဆိပ်သင့်သေဆုံးစေတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် ၁၉၁၁ မှ ၁၉၂၁ ခုနှစ်အတွင်း တရားမဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုများကြောင့် ထောင် ၁၀ ခါ ကျဖူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်က ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုစနစ်အရ သမီးမိန်းကလေးတွေဟာ မိဘတွေရွေးချယ်ပေးတဲ့သူနဲ့ဘဲလက်ထပ်ရပြီး အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေမှု(သို့) အိမ်ထောင်ဘက်က ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှုရိုက်နှက်တာမျိုးတွေရှိနေရင်တောင်မှ ကွာရှင်းခွင့်မရှိပါဘူး။
ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေချိန်၊ ဩဂုတ်လမှာတော့ Nagyrév ရွာက အမျိုးသားတွေဟာ နိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းဖို့ ဆင့်ခေါ်ခံရပါတယ်။ Nagyrév ရွာကလည်း မဟာမိတ်တပ်သားတွေနဲ့ စစ်သုံ့ပန်းတွေကို ထားရှိဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်တွေအဝေးရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မဟာမိတ်တပ်သားတွေနဲ့ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများရှိခဲ့ကြပြီး ခင်ပွန်းသည်တွေ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Mrs. Fazekas ဟာ ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် ခင်ပွန်းသည်တွေကို အဆိပ်ခတ်လုပ်ကြံဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခင်ပွန်းသည်တွေကို အဆိပ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ မိဘတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အဆိပ်ခတ်လုပ်ကြံခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုလုပ်ရပ်ကြောင့် အမျိုးသမီး ၃၄ယောက်နဲ့ အမျိုးသားတဦးကို ဖမ်းစီးပြီး စွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ၈ယောက်ကို သေဒဏ်ပေးခဲ့ပေမယ့် ၂ယောက်ကိုသာကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဦးဆောင်ခဲ့သူ Mrs. Fazekas ခေါ် Mrs. Bukenoveski ကတော့ အာဏာပိုင်တွေဖမ်းစီးရခဲ့ချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။
1. မြို့စားကတော် Elizabeth Bathory
မြို့စားကတော် Elizabeth Bathory သည် ၁၅၆၀-၁၆၁၄ ကြားတွင် မိန်းကလေး ၃၀၀မှ ၆၅၀ လောက်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ မိန်းမငယ်လေးတွေရဲ့ သွေးကိုသောက်သုံးခြင်း၊ သွေးကန်ထဲမှာ စိမ်ခြင်းဟာ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး မိန်းမငယ် ၆၅၀ရဲ့ အသက်ကို စတေးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမနဲ့အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူ လေးဦးရှိပြီး သူမရဲ့သားကောင်အရေအတွက်အတိအကျကို ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူဝန်ထမ်းများက ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများရှိသည်ဟု ဝန်ခံပြောကြားခဲ့သော်လည်း ထိုသူတို့သည်အလျင်အမြန်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သက်သေခံ ၃၀၀ ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ မြို့စားကတော် Elizabeth Bathory ရဲ့ သားကောင်များသည် ၁၀နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိ အိမ်ဖော်မိန်းခလေးများဖြစ်ကြပြီး လခကောင်းကောင်းပေးမည်ဆိုသောစကားဖြင့် သွေးဆောင်ခေါ်ယူထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ မိန်းခလေးငယ်များကို လူမဆန်တဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နည်းများစွာနဲ့ ညှင်းပန်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေအချို့က ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြို့စားကတော် Elizabeth Bathory ဟာလူသားစားတယ်လို့လည်း သံသယရှိကြပါတယ်။
မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်တဲ့ သူမမိသားစုရဲ့ အရေးပါမှုကြောင့် ကွပ်မျက်ခြင်းမခံခဲ့ရပေမယ့် ဖမ်းစီးထောင်ချခြင်းကိုတော့ ခံခဲ့ရပြီး ၁၆၁၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၁ရက်၊ အသက်၅၄နှစ်အရွယ်တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။